ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ဗိုက်ထဲက ရင်သွေးလေးက ယောက်ျားလေးလား မိန်းကလေးလားဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ စည်ဖြိုး – Cele Posts
ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ဗိုက်ထဲက ရင်သွေးလေးက ယောက်ျားလေးလား မိန်းကလေးလားဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ စည်ဖြိုး
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ အတွင်းကပဲ သူအရမ်း ချစ်တဲ့ ချစ်သူလေး သရုပ်ဆောင် ခင်လွှမ်းနဲ့ ရွှေလက်တွဲ လက်ထပ်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စည်ဖြိုးက အခုဆိုရင် အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သွားသလို ကလေးဖေဖေလောင်း တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေပြီမို့ အရင်က ထက်ပိုပြီး အလုပ်တွေကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေသလို မိသားစု အတွက် တာဝန်ကျေတဲ့ ဖခင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေလျက် ရှိပါတယ်။ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းကတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ရင်သွေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မျှော်တလင့်လင့်ရှိ နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ခင်လွှမ်းရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကလည်း ရက်သတ္တပတ် အတော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သလို သားလေးလား သမီးလေးလား ဆိုတာကိုလည်း သိရှိရပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
စည်ဖြိုးကတော့ သူ့ရဲ့ ချစ်ဇနီး ဗိုက်ထဲက ရင်သွေးလေးက သမီးမိန်းကလေး ဖြစ်ကြောင်းကို မိန်းကလေးဝတ်ဂါဝန် ပိစိလေးတွေကိုရှာရင်း “ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေ ဝယ်ပေးရင်ကောင်းမ လည်း စဉ်းစားနေမိ ဟိဟိ.. Hello Santa !!.. The Princess is Coming … .. .” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာကနေ ပရိသတ်တွေကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စည်ဖြိုးကတော့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်တည်း ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူပီပီ ပထမဦးဆုံး ရင်သွေးလေးက သမီးမိန်းကလေးဖြစ် နေတာကြောင့် တော်တော်လေး စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လွှမ်းလည်း သမီးလေးကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ကျန်းမာစွာ မွေးဖွားနိုင် ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
ဇနီးဖွဈသူရဲ့ ဗိုကျထဲက ရငျသှေးလေးက ယောကျြားလေးလား မိနျးကလေးလားဆိုတာ ပရိသတျကွီးကို ပွောပွလိုကျတဲ့ စညျဖွိုး
သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလ အတှငျးကပဲ သူအရမျး ခဈြတဲ့ ခဈြသူလေး သရုပျဆောငျ ခငျလှမျးနဲ့ ရှလေကျတှဲ လကျထပျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
စညျဖွိုးက အခုဆိုရငျ အိမျထောငျသညျ တဈယောကျလညျးဖွဈသှားသလို ကလေးဖဖေလေောငျး တဈယောကျလညျး ဖွဈနပွေီမို့ အရငျက ထကျပိုပွီး အလုပျတှကွေိုးစား လုပျကိုငျနသေလို မိသားစု အတှကျ တာဝနျကတြေဲ့ ဖခငျကောငျး တဈယောကျဖွဈအောငျ ကွိုးစားနလေကျြ ရှိပါတယျ။ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးကတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ရငျသှေးလေးကို ပိုငျဆိုငျဖို့ မြှျောတလငျ့လငျ့ရှိ နကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အခုဆိုရငျ ခငျလှမျးရဲ့ ကိုယျဝနျကလညျး ရကျသတ်တပတျ အတျောရှိခဲ့ပွီဖွဈသလို သားလေးလား သမီးလေးလား ဆိုတာကိုလညျး သိရှိရပွီးပွီ ဖွဈပါတယျ။
စညျဖွိုးကတော့ သူ့ရဲ့ ခဈြဇနီး ဗိုကျထဲက ရငျသှေးလေးက သမီးမိနျးကလေး ဖွဈကွောငျးကို မိနျးကလေးဝတျဂါဝနျ ပိစိလေးတှကေိုရှာရငျး “ဘယျလိုပုံစံလေးတှေ ဝယျပေးရငျကောငျးမ လညျး စဉျးစားနမေိ ဟိဟိ.. Hello Santa !!.. The Princess is Coming … .. .” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ စာမကျြနှာကနေ ပရိသတျတှကေို ပွောပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
စညျဖွိုးကတော့ ညီအဈကို နှဈယောကျတညျး ကွီးပွငျးလာခဲ့ရသူပီပီ ပထမဦးဆုံး ရငျသှေးလေးက သမီးမိနျးကလေးဖွဈ နတောကွောငျ့ တျောတျောလေး စိတျလှုပျရှား ပြျောရှငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခငျလှမျးလညျး သမီးလေးကို အောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ကနျြးမာစှာ မှေးဖှားနိုငျ ပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။
ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ သားဖြစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေ သိအောင် ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့မိခင်